Golaha Nabadda & Ammaanka AU-da oo taageeray Ballaarinta howlgalka Soomaaliya. | Dayniile.com
Home Warkii Golaha Nabadda & Ammaanka AU-da oo taageeray Ballaarinta howlgalka Soomaaliya.
Golaha Nabadda & ammaanka Midowga Afrika ayaa soo dhaweeyay howlgalka wadajirka ah ee nabad ilaalinta Soomaaliya ee cutubka 7-aad oo sanadka soo socda la ballaarinayo sida lagu sheegay Bayaanka.
Qorshahaan waxa uu kaalin weyn ka geysanayaa howlgalka Qaramada Midoobay in ciidamo ay ku garab istaagaan Dalalka ka qaybgalaya inkasta oo tallaabadaan ay horay uga soo horjeesatay Dowladda Soomaaliya.
Askarta AMISOM ee Midowga Afrika hoostaga ayaa shaqadooda la ballaarinayaa waxaana howlgalkooda soo bilawday 2007-dii laga dhigayaa mid caalami ah oo ay ka qaybgalayaan Dalal ka baxsan Qaaradda.
Qorshe howleedka AMISOM oo ku siman dhammaandka 2021 ayaa la filayaa in la dheereeyo si loo gaarsiiyo 2027-ka, balse waxaa wax ka bedel lagu sameynayaa howlahooda si loo ballaariyana loo baahan yahay in Qaramada midoobay kaalin muuqato ka qaadato.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa bixiya fasaxa muddo kordhinta Ciidamada Midowga Afrika, Wargayska The East African ayaa 28-kii August 2021 daabacay warbixin uu xogteeda kasoo xigtay khubaro ku dhaw qorshahaan.
Previous articleWarbixin: Madaxweyne Farmaajo sidee isugu dayey in uu Kiiska Badda uga beddesho Kenya in ay u qabato kuna wareejiso Jubbaland?
Next articleMaxaa dhaliyey eedaha loo jeedinayo Golaha Wakiilada Somaliland?
Faysal Cali Waraabe “ Muwaadiniinta Somaliland waa dadkii lixdankii iyo wixii...
Guddoomiyaha xisbiga UCID ee Somaliland Faysal Cali Waraabe oo caan ku ah dadka Reer Muqdisho ayaa mar kale u gafay dadka Xididka la ah...
Wararki u danbeeyey Qaar ka mid ah Goobaha Gancsiga Guriceel oo...
Wasiir ka tirsan Xukuumadda Rooble oo hunguri kasoo galay Dhul ku...
Guddoomiya Guriceel Anas Cabdi Macalin iyo Ciidamo uu wato oo u...